မီးမဖွားခင်မှာ ကိုယ်ဝန်ဆောင် အမျိုးသမီးတိုင်း လေ့လာထားသင့်တဲ့ အကြောင်းအရာ(၈)ခု - Lifestyle Myanmar
Home Family မီးမဖွားခင်မှာ ကိုယ်ဝန်ဆောင် အမျိုးသမီးတိုင်း လေ့လာထားသင့်တဲ့ အကြောင်းအရာ(၈)ခု
မီးမဖွားခင်မှာ ကိုယ်ဝန်ဆောင် အမျိုးသမီးတိုင်း လေ့လာထားသင့်တဲ့ အကြောင်းအရာ(၈)ခု
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းက ဘဝအသစ်တစ်ခုရဲ့ အစဖြစ်ပါတယ်။ မိခင်လောင်းအများစုဟာ ကျန်းမာသော ကလေးတစ်ယောက်ကို မွေးဖွားနိုင်ဖို့အတွက် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း၊ မွေးဖွားခြင်းနှင့် ပတ်သတ်တဲ့အကြောင်းတွေကို ဆရာဝန်ကို မေးဖို့နဲ့ လေ့လာဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အိပ်စက်ပုံအနေအထား၊ အစားအသောက်၊ လေ့ကျင့်ခန်းမှအစ မိခင်သစ်နဲ့ ကလေးအတွက် အန္တရာယ်တွေ အများကြီးရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေဟာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းနှင့်ပတ်သတ်တာတွေ၊ ကလေးမွေးဖွားခြင်းနှင့် ပတ်သတ်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို လေ့လာထားပြီး ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
၁။ ကိုယ်ဝန်ဆောင် စောင့်ရှောက်မှု
အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဟာ ကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း ဆရာဝန်ကအတည်ပြုပြီးနောက်မှာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နဲ့ပတ်သတ်တဲ့လေ့လာမှုတွေ၊ မီးယပ်သားဖွားဆရာဝန်ရွေးချယ်မှုတွေကို ပြုလုပ်ရပါတယ်။ အဆိုပါ သားဖွားဆရာဝန်က ဘာရောဂါမှမရှိဘဲ ကျန်းမာတဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖို့ ဘယ်လိုနေထိုင် စားသောက်ရမယ်ဆိုတာတွေ၊ လစဉ်စစ်ဆေးမှုလုပ်ဖို့ အချိန်စာရင်းတွေ ပြုလုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်။
ဒီနည်းလမ်းက မိခင်ရဲ့ကျန်းမာရေးနှင့် မမွေးသေးတဲ့ ကလေးရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းစေပြီး အစောပိုင်းအဆင့်မှာ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်မှုနှင့်ပတ်သတ်တဲ့ ဘယ်မူမမှန်မှုကိုမဆို ဖော်ထုတ်နိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတာ သေချာပါတယ်။
သားဖွားမီးယပ်ဆရာဝန်က မိခင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်က ကိုယ်ဝန်ဆောင်ပထမလအတွင်း ဘယ်လိုပြောင်းလဲလာသလဲ၊ သန္ဓေသားဟာ ဘယ်လို ဖွံ့ဖြိုးလာသလဲ ဆိုတဲ့အကြောင်းကို အသိပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ တချို့သားဖွားမီးယပ်ဆရာဝန်များက ကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ မွေးဖွားဖို့နှင့် အာရုံကြောချို့ယွင်းမှုကို တားဆီးပေးတဲ့ ဖောလစ်အက်ဆစ်ကဲ့သို့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဗီတာမင်တွေကို သတ်မှတ်ပေးပါလိမ့်မယ်။
၂။ သင့်ရဲ့မိသားစုသမိုင်းနဲ့ ဖြစ်နိုင်သမျှ မျိုးရိုးလိုက်ရောဂါများအကြောင်းကို လေ့လာပါ
မိသားစုတစ်ခု စတင်ဖို့ အစီအစဉ်မဆွဲခင်မှာ မိဘနှစ်ယောက်စလုံးဟာ ကျန်းမာတဲ့ကလေးမွေးဖွားဖို့ မိသားစုသမိုင်းကို လေ့လာထားဖို့ အရေးကြီးပါတယ် ။ မိသားစုထဲမှာ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ မသန်စွမ်းခြင်း၊ ချို့ယွင်းချက်ဖြင့် မွေးဖွားခြင်း သို့မဟုတ် မျိုးရိုးလိုက်ရောဂါ ရှိခဲ့ရင် ကလေးမှာ အမွေဆက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိတာကြောင့် မိသားစုသမိုင်းကို မိဘတိုင်းသိထားသင့်ပါတယ်။
သိရှိနားလည်ထားခြင်းက မိဘတွေကို အစောပိုင်းအဆင့်မှာ ဒီလိုပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ မိသားစု သမိုင်းကြောင်းပေါ် အခြေခံပြီး သားဖွားမီးယပ်ဆရာဝန်က ကလေးမှာ မျိုးရိုးလိုက်ရောဂါ ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ဆိုတဲ့ ကျန်းမာရေးကိစ္စရပ်များကို သိရှိစေဖို့ မျိုးဗီဇစမ်းသပ်ခြင်း ပြုလုပ်ပေးပြီး ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်းပြုလုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်။
၃။ ကလေးမမွေးခင်မှာ ရှောင်ရှားရမယ့် အစားအစာများနှင့် စားသုံးရမယ့် အစားအစာများ
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်မှာ ၂ယောက်စာစားရမယ်ဆိုတာက အစားအစာတွေအများကြီးကို ၂ယောက်စာစားဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ ဗီတာမင်နှင့် သတ္တုဓါတ် အာဟာရများစွာ ပါဝင်တဲ့ အစားအစာများကို စုံစုံလင်လင်စားပေးဖို့ ပြောတာပါ။ သံဓါတ်၊ ကယ်လစီယမ်၊ ဖောလစ်အက်ဆစ်နှင့် ပရိုတိန်းဓါတ်မြင့်မားတဲ့အစားအစာဟာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်အတွင်း လိုအပ်တဲ့ အစားအစာများဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်းမာပြီး အာဟာရရှိတဲ့ အစားအစာများက မိခင်နဲ့ကလေး နှစ်ဦးစလုံးအတွက် လိုအပ်တဲ့ စွမ်းအင်နဲ့ ကယ်လိုရီတွေ ပေးပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဟာ ဗီတာမင်နဲ့ သတ္တုဓါတ်တွေ ပိုပြီး လိုအပ်တယ်။ အစားအသောက်အလေ့အထ ချို့တဲ့ခြင်းက ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဆီးချိုရောဂါအန္တရာယ်များကို တိုးစေနိုင်သလို မီးဖွားနေစဉ်အတွင်း နောက်ဆက်တွဲကျန်းမာရေးပြဿနာများကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။
နို့ထွက်ပစ္စည်းများမှာ သန္ဓေသားကြီးထွားဖို့အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ ကယ်လစီယမ်၊ ပရိုတိန်းဓါတ်မြင့်မားစွာ ပါဝင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ပရိုဘိုင်အိုတစ် ဂုဏ်သတ္တိတွေအတွက် ဒိန်ချဉ်ကို စားသုံးဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
ပဲအမျိုးမျိုးမှာ အမျှင်ဓါတ်နဲ့ ဖောလစ်တို့ ကြွယ်ဝပြီး ရောဂါများနဲ့ ချို့ယွင်းချက်ဖြင့် မွေးဖွားမှုအန္တရာယ်ကို လျော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။
ကန်စွန်းဥနှင့် မုန်လာဥနီတွေက မိခင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်က ဆဲလ်များ၏ ပုံမှန်ထုတ်လုပ်ခြင်းမှာ အထောက်အကူပေးသော ဗီတာမင်အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတဲ့ beta- carotene ရဲ့အကောင်းဆုံး အရင်းအမြစ် ဖြစ်ကြပါတယ်။
ဆော်လမွန်ငါးကဲ့သို့ အိုမီဂါ 3ကြွယ်ဝတဲ့ အစားအစာများက ကြီးထွားလာတဲ့ သန္ဓေသားမှာ ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်မှုအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
အစိမ်းရောင် အရွက်များမှာ သံဓါတ်နဲ့ အမျှင်ဓါတ်ကြွယ်ဝတာကြောင့် ကလေးဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက် အရေးပါတဲ့ အာဟာရဓါတ်တွေ အများစု ပါဝင်ပါတယ်။
အဆီနည်းတဲ့ အသားတွေမှာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်အတွင်း အရေးကြီးတဲ့ သံဓါတ်၊ ပရိုတိန်းနှင့် ဗီတာမင် B အရင်းအမြစ် မြင့်မားပါတယ်။
ငါးကြီးဆီဟာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်အတွင်း အလွန်အရေးပါတဲ့ ဗီတာမင် D၊ ဗီတာမင် A နှင့် အိုမီဂါ3ဖက်တီးအက်ဆစ်တို့ ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ငါးမစားတဲ့ မိခင်တွေ ရွေးချယ်စရာတစ်ခုအဖြစ် သောက်သုံးနိုင်ပါတယ်။
ဘယ်ရီသီးများမှာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်အတွင်း ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ ဝမ်းချုပ်ခြင်းကို ကူညီပေးနိုင်တဲ့ အင်တီအောက်ဆီဒင့်များနဲ့ အမျှင်ဓါတ်၊ ဗီတာမင်စီတို့ ကြွယ်ဝပါတယ်။
အစေ့အဆန်များမှာ အမျှင်ဓါတ်၊ plant compounds၊ ဗီတာမင်ဘီနှင့် မဂ္ဂနီဆီယမ်တို့ ကြွယ်ဝပါတယ်။
salmonella အစာအိမ်အူလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ခြင်းအန္တရာယ်ကိုဖြစ်စေတဲ့ ကြက်ဥအစိမ်းများ၊ မကျက်တကျက်ချက်ထားတဲ့ အစားအစာများကို ရှောင်ရှးပါ။
အသားစိမ်းငါးစိမ်းတွေ ၊ ကြက်အူချောင်း၊ ဝက်အူချောင်းတွေ၊ အပူလေးနည်းနည်းပေးပြီး ချက်ထားတဲ့ အသားတွေက toxoplasmosis ရောဂါကိုဖြစ်စေတာကြောင့် ရှောင်ကြဉ်ပါ။
အသည်းတွေက သန္ဓေသားကို ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ ဗီတာမင် A အလွန်မြင့်မားတာကြောင့် ရှောင်ကြဉ်ပါ။
သတိပြုရန်။ လိုအပ်တဲ့ အာဟာရဓါတ်များ ရရှိဖို့နဲ့ သင့်ကလေး ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ အစားအစာများကို ရှောင်ကြဉ်ဖို့အတွက် ဘယ်အစားအစာတွေကို စားသုံးရမယ်၊ ရှောင်ကြဉ်ရမယ်ဆိုတာ ပထမဦးဆုံး သင့်ရဲ့ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
၄။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် ဘယ်လေ့ကျင့်ခန်းတွေက ပြုလုပ်ဖို့ အန္တရာယ်ကင်းသလဲဆိုတာ လေ့လာပါ
နေ့စဉ်နေ့တိုင်း လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းက ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိးသမီး၏ ပြောင်းလဲနေတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ပုံမှန်လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို သေချာစေနိုင်ပါတယ်။ ကလေးမွေးဖွားဖို့အတွက် ကာယခွန်အားနှင့် စွမ်းအင်တွေ အများကြီးလိုအပ်တာကြောင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်အတွင်း လေ့ကျင့်ခန်းက မဖြစ်မနေလုပ်ပေးရပါမယ်။ တတ်ကြွစွာနေထိုင်ခြင်းက ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်နှင့် မီးဖွားစဉ်အတွင်း နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးများကို လျော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။ မိခင်တစ်ယောက်ဟာ ကိုယ်ဝန်မဆောင်ခင် ကာယလှုပ်ရှားမှု မရှိဘူးဆိုရင်တောင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် စတင်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုက ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်မှာဖြစ်တတ်တဲ့ သက်တောင့်သက်သာ မရှိတာတွေကို လျော့ချပေးနိုင်ပြီး မီးဖွားစဉ် နာကျင်မှုကို လျော့ချဖို့ ကြွက်သာသန်မာအောင် တည်ဆောက်ပေးနိုင်ပါတယ်။
လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ ရေကူးခြင်းနှင့် ကခြင်းကဲ့သို့ သင့်နှလုံးခုန်နှုန်းကို ပိုမြန်စေနိုင်မယ့် အေရိုးဗစ်လှုပ်ရှားမှုများကို ရွေးချယ်ပါ။
အသက်ရှုမဝဘူးလို့ ခံစားရတဲ့အခါ ပုံမှန်အားလပ်ချိန်ယူပါ။
မလေ့ကျင့်ခင်နဲ့ လေ့ကျင့်ပြီးနောက်မှာ ရေများများသောက်ပါ။
အလေးမဖို့ ရွေးချယ်လျှင် ဥပမာ ၃ကီလိုလောက် အရမ်းပေါ့တဲ့ အလေးကို မနိုင်ပါတယ်။
relaxလုပ်နေစဉ် အသက်ရှုသွင်းပြီး အလေးမတဲ့ အချိန်မှာ အသက်ရှုထုတ်ပေးပါ။
သင့်ရဲ့ခါးနဲ့ တင်ပါးဆုံကို ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ လေးလံတဲ့ အလေးမတာကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။
လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေစဉ် အသက်အောင့်မထားပါနဲ့။ ပုံမှန်အသက်ရှုဖို့ ကြိုးစားပါ။
ပက်လက်အနေအထား လဲလျောင်းရတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းကို ရှောင်ပါ။
လဲကျမှုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းမျိုးကို ရှောင်ပါ။
ဒဏ်ရာရစေနိုင်တဲ့ မည်သည့်အားကစားမျိုးကိုမဆို ကစားခြင်းရှောင်ပါ။
သတိပြုရန်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေဟာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်အတွင်း ဘယ်လေ့ကျင့်ခန်းအမျိုးအစားကို လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်၊ မိခင်ကျန်းမာရေးနဲ့ ကလေးရဲ့ကျန်းမာရေးအန္တရာယ်ကို ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ ဘယ်လေ့ကျင့်ခန်းအမျိုးအစားကို ရှောင်ရှားသင့်တယ်ဆိုတာ ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
၅။ အသင့်တော်ဆုံး အိပ်စက်မှုအနေအထားနှင့် ပတ်သတ်ပြီး လေ့လာပါ
မောပန်းခြင်းနှင့် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းက အထူးသဖြင့် ပထမဦးဆုံး ၁၂ပတ်ကာလအတွင်းမှာ အဖြစ်များပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တိုးတတ်မှုကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အိပ်စက်မှုအနေအထားတချို့ ရှိပါတယ်။ National Health Service ရဲ့အဆိုအရ အန္တရာယ်အကင်းဆုံး အိပ်စက်မှုအနေထားက ဘယ်ဘက်စောင်းပြီး အိပ်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ညာဘက်စောင်းပြီး အိပ်စက်ခြင်းက မိခင်လောင်းအတွက် မသက်မသာဖြစ်စေတဲ့ IVC လို့ခေါ်တဲ့ နှလုံးသွေးပြန်ကြော ပေါ်ကို ဖိအား သက်ရောက်စေနိုင်ပါတယ်။
သုတေသနအရ ကိုယ်ဝန်ဆောင်၂၈ပတ်ရပြီးနောက် ပက်လက်အိပ်စက်ခြင်းက stillbirth(ကလေးအသေမွေးခြင်း) အန္တရာယ်ကို တိုးစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါက ကလေးကို ထောက်ပံ့ပေးတဲ့ အောင်ဆီဂျင်နဲ့ သွေးစီးဆင်းမှုကို ကန့်သတ်လိုက်တဲ့ အနေအထားကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ပတ်လက်အိပ်တဲ့အနေအထားနဲ့နိုးလျှင် ဘေးစောင်းအိပ်ပြီး သင့်အနေအထားကို ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ ပက်လက်အိပ်စက်ခြင်းနှင့် အရမ်းလှိမ့်မိခြင်းမှ တားဆီးနိုင်ဖို့ သင့်ခြေထောက်များကြားမှာ ထားနိုင်တဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင် ခေါင်းအုံးတွေကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
၆။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဂရုစိုက်မှုနှင့် ယောဂရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေကို လေ့လာပါ
ကိုယ်ဝန်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာ စိတ်ဖိစီးမှုတွေ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖိစီးမှုတွေ ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာ ဘယ်သူမှ ငြင်းမရပါဘူး။ သင့်မှာဖြစ်တဲ့ ဘယ်အရာမဆို ကလေးဆီကို ရောက်တာကြောင့် သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကို ဂရုစိုက်ဖို့ လိုပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှုခံစားနေရတဲ့ အခြေအနေ၊ မနှစ်မြို့ဖွယ်အခြေအနေကနေ ရှောင်ရှားပြီး သင်တတ်နိုင်သလောက် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဂရုစိုက်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
the National Institute of Health ရဲ့အဆိုအရ ယောဂလေ့ကျင့်ခန်းက အထူးသဖြင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေကို ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ စိတ်ကို ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးအမျိုးမျိုး ပေးစွမ်းပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်တဲ့အခါဖြစ်တတ်တဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို manage လုပ်ပေးပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်အတွင်း ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့ ရောဂါများစွာကို တားဆီးပေးပါတယ်။ (ဥပမာ- ဖောရောင်တာ၊ ဆီးချို၊ ကိုယ်ဝန်သွေးတိုးရောဂါ)
မီးဖွားနေစဉ်အတွင်း ဖြစ်လာတဲ့ သင့်ခန္ဓာကိုယ်က စိုးရိမ်ပူပန်မှုပမာဏကို လျော့ကျစေပါတယ်။
၇။ မီးမဖွားမှီ အပြောင်းအလဲတွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး လေ့လာပါ
မီးမဖွားမီကာလက မိဘဘဝသို့ အကူးအပြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဟာ ဒါကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ် တွေ့ကြုံတတ်ပါတယ်။ လူတစ်ယောက်စီမှာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စိတ်အပြောင်းအလဲက မတူညီတဲ့အချိန်တွေမှာ တွေ့ကြုံရတာကြောင့် လအတိအကျ မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ပုံမှန်အားဖြင့် ၃လ၊ ၄လကျော်လာပြီးနောက်မှာ တွေ့ကြုံရတတ်ပါတယ်။ ၂မွှာ၊ ၃မွှာပူးမျှော်လင့်ထားတဲ့ မိဘတွေဟာ ကလေးတစ်ယောက်ပဲ မျှော်လင့်ထားတဲ့ မိဘတွထက် စိတ်ဖိစီးမှု ပိုများပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သူတို့ဟာ မွေးဖွားပြီး နလန်ပြန်ထူနိုင်ဖို့ အချိန်များများ လိုအပ်သလို မိသားစုနဲ့ အိမ်ထောင်ဖက်ဆီကနေ အကူအညီတွေ ပိုပြီး လိုအပ်ပါတယ်။
၈။ ရိုးရိုးမွေးဖွားတာနှင့် ခွဲမွေးတဲ့အကြောင်းကို လေ့လာပါ
တချို့ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေဟာ ရိုးရိုးမွေးဖွားကြတာ ရှိသလို၊ ခွဲမွေးတဲ့သူတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဘယ်လို ဆုံးဖြတ်ရမယ်ဆိုတာကတော့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေရဲ့ ကျန်းမာရေးအပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးကောင်းတဲ့ မိခင်တွေအတွက် ရိုးရိုးမွေးတာ ပြဿနာမရှိပေမယ့် ကိုယ်ခံအားနည်းသူတွေ၊ ရောဂါရှိသူတွေမှာ ခွဲမွေးတာက ပိုအဆင်ပြေစေပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေဟာ ရိုးရိုးမွေးရမလား၊ ခွဲမွေးရမလား? ခွဲစိတ်မွေးရမယ့် ရောဂါလက္ခဏာများနှင့် လက္ခဏာများကို နားလည်စေဖို့ မီးယပ်သားဖွားနှင့် တိုင်ပင်ဖို့ လိုပါတယ်။
မီးမဖှားခငျမှာ ကိုယျဝနျဆောငျ အမြိုးသမီးတိုငျး လလေ့ာထားသငျ့တဲ့ အကွောငျးအရာ(၈)ခု
ကိုယျဝနျဆောငျခွငျးက ဘဝအသဈတဈခုရဲ့ အစဖွဈပါတယျ။ မိခငျလောငျးအမြားစုဟာ ကနျြးမာသော ကလေးတဈယောကျကို မှေးဖှားနိုငျဖို့အတှကျ ကိုယျဝနျဆောငျခွငျး၊ မှေးဖှားခွငျးနှငျ့ ပတျသတျတဲ့အကွောငျးတှကေို ဆရာဝနျကို မေးဖို့နဲ့ လလေ့ာဖို့ လိုအပျပါတယျ။ အိပျစကျပုံအနအေထား၊ အစားအသောကျ၊ လကေ့ငျြ့ခနျးမှအစ မိခငျသဈနဲ့ ကလေးအတှကျ အန်တရာယျတှေ အမြားကွီးရှိနိုငျပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ ကိုယျဝနျဆောငျအမြိုးသမီးတှဟော ကိုယျဝနျဆောငျခွငျးနှငျ့ပတျသတျတာတှေ၊ ကလေးမှေးဖှားခွငျးနှငျ့ ပတျသတျတဲ့ အကွောငျးအရာတှကေို လလေ့ာထားပွီး ဆရာဝနျနှငျ့ တိုငျပငျဆှေးနှေးဖို့ လိုအပျပါတယျ။
၁။ ကိုယျဝနျဆောငျ စောငျ့ရှောကျမှု
အမြိုးသမီးတဈယောကျဟာ ကိုယျဝနျရှိနပွေီဖွဈကွောငျး ဆရာဝနျကအတညျပွုပွီးနောကျမှာ ကိုယျဝနျဆောငျနဲ့ပတျသတျတဲ့လလေ့ာမှုတှေ၊ မီးယပျသားဖှားဆရာဝနျရှေးခယျြမှုတှကေို ပွုလုပျရပါတယျ။ အဆိုပါ သားဖှားဆရာဝနျက ဘာရောဂါမှမရှိဘဲ ကနျြးမာတဲ့ ကိုယျဝနျဆောငျဖို့ ဘယျလိုနထေိုငျ စားသောကျရမယျဆိုတာတှေ၊ လစဉျစဈဆေးမှုလုပျဖို့ အခြိနျစာရငျးတှေ ပွုလုပျပေးပါလိမျ့မယျ။
ဒီနညျးလမျးက မိခငျရဲ့ကနျြးမာရေးနှငျ့ မမှေးသေးတဲ့ ကလေးရဲ့ကနျြးမာရေးအတှကျ ကောငျးစပွေီး အစောပိုငျးအဆငျ့မှာ ဖွဈပျေါလာနိုငျတဲ့ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတတျမှုနှငျ့ပတျသတျတဲ့ ဘယျမူမမှနျမှုကိုမဆို ဖျောထုတျနိုငျလိမျ့မယျဆိုတာ သခြောပါတယျ။
သားဖှားမီးယပျဆရာဝနျက မိခငျရဲ့ခန်ဓာကိုယျက ကိုယျဝနျဆောငျပထမလအတှငျး ဘယျလိုပွောငျးလဲလာသလဲ၊ သန်ဓသေားဟာ ဘယျလို ဖှံ့ဖွိုးလာသလဲ ဆိုတဲ့အကွောငျးကို အသိပေးနိုငျပါလိမျ့မယျ။ တခြို့သားဖှားမီးယပျဆရာဝနျမြားက ကနျြးကနျြးမာမာနဲ့ မှေးဖှားဖို့နှငျ့ အာရုံကွောခြို့ယှငျးမှုကို တားဆီးပေးတဲ့ ဖောလဈအကျဆဈကဲ့သို့ ကိုယျဝနျဆောငျဗီတာမငျတှကေို သတျမှတျပေးပါလိမျ့မယျ။
၂။ သငျ့ရဲ့မိသားစုသမိုငျးနဲ့ ဖွဈနိုငျသမြှ မြိုးရိုးလိုကျရောဂါမြားအကွောငျးကို လလေ့ာပါ
မိသားစုတဈခု စတငျဖို့ အစီအစဉျမဆှဲခငျမှာ မိဘနှဈယောကျစလုံးဟာ ကနျြးမာတဲ့ကလေးမှေးဖှားဖို့ မိသားစုသမိုငျးကို လလေ့ာထားဖို့ အရေးကွီးပါတယျ ။ မိသားစုထဲမှာ ဖှံ့ဖွိုးမှုဆိုငျရာ မသနျစှမျးခွငျး၊ ခြို့ယှငျးခကျြဖွငျ့ မှေးဖှားခွငျး သို့မဟုတျ မြိုးရိုးလိုကျရောဂါ ရှိခဲ့ရငျ ကလေးမှာ အမှဆေကျခံနိုငျဖှယျရှိတာကွောငျ့ မိသားစုသမိုငျးကို မိဘတိုငျးသိထားသငျ့ပါတယျ။
သိရှိနားလညျထားခွငျးက မိဘတှကေို အစောပိုငျးအဆငျ့မှာ ဒီလိုပွဿနာတှကေို ဖွရှေငျးနိုငျပါလိမျ့မယျ။ မိသားစု သမိုငျးကွောငျးပျေါ အခွခေံပွီး သားဖှားမီးယပျဆရာဝနျက ကလေးမှာ မြိုးရိုးလိုကျရောဂါ ဖွဈနိုငျမဖွဈနိုငျဆိုတဲ့ ကနျြးမာရေးကိစ်စရပျမြားကို သိရှိစဖေို့ မြိုးဗီဇစမျးသပျခွငျး ပွုလုပျပေးပွီး ဆှေးနှေးတိုငျပငျခွငျးပွုလုပျပေးပါလိမျ့မယျ။
၃။ ကလေးမမှေးခငျမှာ ရှောငျရှားရမယျ့ အစားအစာမြားနှငျ့ စားသုံးရမယျ့ အစားအစာမြား
ကိုယျဝနျဆောငျစဉျမှာ ၂ယောကျစာစားရမယျဆိုတာက အစားအစာတှအေမြားကွီးကို ၂ယောကျစာစားဖို့မဟုတျပါဘူး။ ဗီတာမငျနှငျ့ သတ်တုဓါတျ အာဟာရမြားစှာ ပါဝငျတဲ့ အစားအစာမြားကို စုံစုံလငျလငျစားပေးဖို့ ပွောတာပါ။ သံဓါတျ၊ ကယျလစီယမျ၊ ဖောလဈအကျဆဈနှငျ့ ပရိုတိနျးဓါတျမွငျ့မားတဲ့အစားအစာဟာ ကိုယျဝနျဆောငျစဉျအတှငျး လိုအပျတဲ့ အစားအစာမြားဖွဈပါတယျ။ ကနျြးမာပွီး အာဟာရရှိတဲ့ အစားအစာမြားက မိခငျနဲ့ကလေး နှဈဦးစလုံးအတှကျ လိုအပျတဲ့ စှမျးအငျနဲ့ ကယျလိုရီတှေ ပေးပါတယျ။
ကိုယျဝနျဆောငျအမြိုးသမီးတဈယောကျဟာ ဗီတာမငျနဲ့ သတ်တုဓါတျတှေ ပိုပွီး လိုအပျတယျ။ အစားအသောကျအလအေ့ထ ခြို့တဲ့ခွငျးက ကိုယျဝနျဆောငျဆီးခြိုရောဂါအန်တရာယျမြားကို တိုးစနေိုငျသလို မီးဖှားနစေဉျအတှငျး နောကျဆကျတှဲကနျြးမာရေးပွဿနာမြားကို ဖွဈပျေါစနေိုငျပါတယျ။
နို့ထှကျပစ်စညျးမြားမှာ သန်ဓသေားကွီးထှားဖို့အတှကျ မရှိမဖွဈလိုအပျတဲ့ ကယျလစီယမျ၊ ပရိုတိနျးဓါတျမွငျ့မားစှာ ပါဝငျပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ ပရိုဘိုငျအိုတဈ ဂုဏျသတ်တိတှအေတှကျ ဒိနျခဉျြကို စားသုံးဖို့ အရေးကွီးပါတယျ။
ပဲအမြိုးမြိုးမှာ အမြှငျဓါတျနဲ့ ဖောလဈတို့ ကွှယျဝပွီး ရောဂါမြားနဲ့ ခြို့ယှငျးခကျြဖွငျ့ မှေးဖှားမှုအန်တရာယျကို လြော့ခပြေးနိုငျပါတယျ။
ကနျစှနျးဥနှငျ့ မုနျလာဥနီတှကေ မိခငျရဲ့ခန်ဓာကိုယျက ဆဲလျမြား၏ ပုံမှနျထုတျလုပျခွငျးမှာ အထောကျအကူပေးသော ဗီတာမငျအဖွဈပွောငျးလဲသှားတဲ့ beta- carotene ရဲ့အကောငျးဆုံး အရငျးအမွဈ ဖွဈကွပါတယျ။
ဆျောလမှနျငါးကဲ့သို့ အိုမီဂါ 3ကွှယျဝတဲ့ အစားအစာမြားက ကွီးထှားလာတဲ့ သန်ဓသေားမှာ ဦးနှောကျဖှံ့ဖွိုးတိုးတတျမှုအတှကျ အကောငျးဆုံးဖွဈပါတယျ။
အစိမျးရောငျ အရှကျမြားမှာ သံဓါတျနဲ့ အမြှငျဓါတျကွှယျဝတာကွောငျ့ ကလေးဖှံ့ဖွိုးဖို့အတှကျ အရေးပါတဲ့ အာဟာရဓါတျတှေ အမြားစု ပါဝငျပါတယျ။
အဆီနညျးတဲ့ အသားတှမှော ကိုယျဝနျဆောငျစဉျအတှငျး အရေးကွီးတဲ့ သံဓါတျ၊ ပရိုတိနျးနှငျ့ ဗီတာမငျ B အရငျးအမွဈ မွငျ့မားပါတယျ။
ငါးကွီးဆီဟာ ကိုယျဝနျဆောငျစဉျအတှငျး အလှနျအရေးပါတဲ့ ဗီတာမငျ D၊ ဗီတာမငျ A နှငျ့ အိုမီဂါ3ဖကျတီးအကျဆဈတို့ ထောကျပံ့ပေးနိုငျပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ ငါးမစားတဲ့ မိခငျတှေ ရှေးခယျြစရာတဈခုအဖွဈ သောကျသုံးနိုငျပါတယျ။
ဘယျရီသီးမြားမှာ ကိုယျဝနျဆောငျစဉျအတှငျး ဖွဈပျေါစတေဲ့ ဝမျးခြုပျခွငျးကို ကူညီပေးနိုငျတဲ့ အငျတီအောကျဆီဒငျ့မြားနဲ့ အမြှငျဓါတျ၊ ဗီတာမငျစီတို့ ကွှယျဝပါတယျ။
အစအေ့ဆနျမြားမှာ အမြှငျဓါတျ၊ plant compounds၊ ဗီတာမငျဘီနှငျ့ မဂ်ဂနီဆီယမျတို့ ကွှယျဝပါတယျ။
salmonella အစာအိမျအူလမျးကွောငျးပိုးဝငျခွငျးအန်တရာယျကိုဖွဈစတေဲ့ ကွကျဥအစိမျးမြား၊ မကကျြတကကျြခကျြထားတဲ့ အစားအစာမြားကို ရှောငျရှးပါ။
အသားစိမျးငါးစိမျးတှေ ၊ ကွကျအူခြောငျး၊ ဝကျအူခြောငျးတှေ၊ အပူလေးနညျးနညျးပေးပွီး ခကျြထားတဲ့ အသားတှကေ toxoplasmosis ရောဂါကိုဖွဈစတောကွောငျ့ ရှောငျကွဉျပါ။
အသညျးတှကေ သန်ဓသေားကို ထိခိုကျစနေိုငျတဲ့ ဗီတာမငျ A အလှနျမွငျ့မားတာကွောငျ့ ရှောငျကွဉျပါ။
သတိပွုရနျ။ လိုအပျတဲ့ အာဟာရဓါတျမြား ရရှိဖို့နဲ့ သငျ့ကလေး ထိခိုကျစနေိုငျတဲ့ အစားအစာမြားကို ရှောငျကွဉျဖို့အတှကျ ဘယျအစားအစာတှကေို စားသုံးရမယျ၊ ရှောငျကွဉျရမယျဆိုတာ ပထမဦးဆုံး သငျ့ရဲ့ဆရာဝနျနှငျ့ တိုငျပငျဖို့ အရေးကွီးပါတယျ။
၄။ ကိုယျဝနျဆောငျစဉျ ဘယျလကေ့ငျြ့ခနျးတှကေ ပွုလုပျဖို့ အန်တရာယျကငျးသလဲဆိုတာ လလေ့ာပါ
နစေ့ဉျနတေို့ငျး လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျခွငျးက ကိုယျဝနျဆောငျအမြိးသမီး၏ ပွောငျးလဲနတေဲ့ ခန်ဓာကိုယျရဲ့ ပုံမှနျလုပျငနျးဆောငျတာမြားကို သခြောစနေိုငျပါတယျ။ ကလေးမှေးဖှားဖို့အတှကျ ကာယခှနျအားနှငျ့ စှမျးအငျတှေ အမြားကွီးလိုအပျတာကွောငျ့ ကိုယျဝနျဆောငျစဉျအတှငျး လကေ့ငျြ့ခနျးက မဖွဈမနလေုပျပေးရပါမယျ။ တတျကွှစှာနထေိုငျခွငျးက ကိုယျဝနျဆောငျစဉျနှငျ့ မီးဖှားစဉျအတှငျး နောကျဆကျတှဲဆိုးကြိုးမြားကို လြော့ခပြေးနိုငျပါတယျ။ မိခငျတဈယောကျဟာ ကိုယျဝနျမဆောငျခငျ ကာယလှုပျရှားမှု မရှိဘူးဆိုရငျတောငျ ကိုယျဝနျဆောငျစဉျ စတငျလုပျနိုငျပါတယျ။ ကိုယျလကျလှုပျရှားမှုက ကိုယျဝနျဆောငျစဉျမှာဖွဈတတျတဲ့ သကျတောငျ့သကျသာ မရှိတာတှကေို လြော့ခပြေးနိုငျပွီး မီးဖှားစဉျ နာကငျြမှုကို လြော့ခဖြို့ ကွှကျသာသနျမာအောငျ တညျဆောကျပေးနိုငျပါတယျ။
လမျးလြှောကျခွငျး၊ ရကေူးခွငျးနှငျ့ ကခွငျးကဲ့သို့ သငျ့နှလုံးခုနျနှုနျးကို ပိုမွနျစနေိုငျမယျ့ အရေိုးဗဈလှုပျရှားမှုမြားကို ရှေးခယျြပါ။
အသကျရှုမဝဘူးလို့ ခံစားရတဲ့အခါ ပုံမှနျအားလပျခြိနျယူပါ။
မလကေ့ငျြ့ခငျနဲ့ လကေ့ငျြ့ပွီးနောကျမှာ ရမြေားမြားသောကျပါ။
အလေးမဖို့ ရှေးခယျြလြှငျ ဥပမာ ၃ကီလိုလောကျ အရမျးပေါ့တဲ့ အလေးကို မနိုငျပါတယျ။
relaxလုပျနစေဉျ အသကျရှုသှငျးပွီး အလေးမတဲ့ အခြိနျမှာ အသကျရှုထုတျပေးပါ။
သငျ့ရဲ့ခါးနဲ့ တငျပါးဆုံကို ထိခိုကျစနေိုငျတဲ့ လေးလံတဲ့ အလေးမတာကို ရှောငျကွဉျပါ။
လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျနစေဉျ အသကျအောငျ့မထားပါနဲ့။ ပုံမှနျအသကျရှုဖို့ ကွိုးစားပါ။
ပကျလကျအနအေထား လဲလြောငျးရတဲ့ လကေ့ငျြ့ခနျးကို ရှောငျပါ။
လဲကမြှုဖွဈစနေိုငျတဲ့ လကေ့ငျြ့ခနျးမြိုးကို ရှောငျပါ။
ဒဏျရာရစနေိုငျတဲ့ မညျသညျ့အားကစားမြိုးကိုမဆို ကစားခွငျးရှောငျပါ။
သတိပွုရနျ။ ကိုယျဝနျဆောငျအမြိုးသမီးတှဟော ကိုယျဝနျဆောငျစဉျအတှငျး ဘယျလကေ့ငျြ့ခနျးအမြိုးအစားကို လုပျဖို့လိုအပျတယျ၊ မိခငျကနျြးမာရေးနဲ့ ကလေးရဲ့ကနျြးမာရေးအန်တရာယျကို ထိခိုကျစနေိုငျတဲ့ ဘယျလကေ့ငျြ့ခနျးအမြိုးအစားကို ရှောငျရှားသငျ့တယျဆိုတာ ဆရာဝနျနှငျ့ တိုငျပငျဆှေးနှေးပါ။
၅။ အသငျ့တျောဆုံး အိပျစကျမှုအနအေထားနှငျ့ ပတျသတျပွီး လလေ့ာပါ
မောပနျးခွငျးနှငျ့ ပငျပနျးနှမျးနယျခွငျးက အထူးသဖွငျ့ ပထမဦးဆုံး ၁၂ပတျကာလအတှငျးမှာ အဖွဈမြားပါတယျ။ ကိုယျဝနျဆောငျတိုးတတျမှုကို အန်တရာယျဖွဈစနေိုငျတဲ့ အိပျစကျမှုအနအေထားတခြို့ ရှိပါတယျ။ National Health Service ရဲ့အဆိုအရ အန်တရာယျအကငျးဆုံး အိပျစကျမှုအနထေားက ဘယျဘကျစောငျးပွီး အိပျဖို့ ဖွဈပါတယျ။ ညာဘကျစောငျးပွီး အိပျစကျခွငျးက မိခငျလောငျးအတှကျ မသကျမသာဖွဈစတေဲ့ IVC လို့ချေါတဲ့ နှလုံးသှေးပွနျကွော ပျေါကို ဖိအား သကျရောကျစနေိုငျပါတယျ။
သုတသေနအရ ကိုယျဝနျဆောငျ၂၈ပတျရပွီးနောကျ ပကျလကျအိပျစကျခွငျးက stillbirth(ကလေးအသမှေေးခွငျး) အန်တရာယျကို တိုးစနေိုငျပါတယျ။ ဒါက ကလေးကို ထောကျပံ့ပေးတဲ့ အောငျဆီဂငျြနဲ့ သှေးစီးဆငျးမှုကို ကနျ့သတျလိုကျတဲ့ အနအေထားကွောငျ့ဖွဈပါတယျ။ ပတျလကျအိပျတဲ့အနအေထားနဲ့နိုးလြှငျ ဘေးစောငျးအိပျပွီး သငျ့အနအေထားကို ပွောငျးလဲနိုငျပါတယျ။ ပကျလကျအိပျစကျခွငျးနှငျ့ အရမျးလှိမျ့မိခွငျးမှ တားဆီးနိုငျဖို့ သငျ့ခွထေောကျမြားကွားမှာ ထားနိုငျတဲ့ ကိုယျဝနျဆောငျ ခေါငျးအုံးတှကေို အသုံးပွုနိုငျပါတယျ။
၆။ ကိုယျ့ကိုယျကို ဂရုစိုကျမှုနှငျ့ ယောဂရဲ့ အကြိုးကြေးဇူးတှကေို လလေ့ာပါ
ကိုယျဝနျဆောငျတဲ့အခြိနျမှာ စိတျဖိစီးမှုတှေ ရုပျပိုငျးဆိုငျရာ ဖိစီးမှုတှေ ဖွဈနိုငျတယျဆိုတာ ဘယျသူမှ ငွငျးမရပါဘူး။ သငျ့မှာဖွဈတဲ့ ဘယျအရာမဆို ကလေးဆီကို ရောကျတာကွောငျ့ သငျ့ခန်ဓာကိုယျကို ဂရုစိုကျဖို့ လိုပါတယျ။ စိတျဖိစီးမှုခံစားနရေတဲ့ အခွအေနေ၊ မနှဈမွို့ဖှယျအခွအေနကေနေ ရှောငျရှားပွီး သငျတတျနိုငျသလောကျ ကိုယျ့ကိုယျကို ဂရုစိုကျဖို့ အရေးကွီးပါတယျ။
the National Institute of Health ရဲ့အဆိုအရ ယောဂလကေ့ငျြ့ခနျးက အထူးသဖွငျ့ ကိုယျဝနျဆောငျမိခငျတှကေို ခန်ဓာကိုယျနဲ့ စိတျကို ကနျြးမာရေးအကြိုးကြေးဇူးအမြိုးမြိုး ပေးစှမျးပါတယျ။
ကိုယျဝနျဆောငျတဲ့အခါဖွဈတတျတဲ့ စိတျဖိစီးမှုတှကေို manage လုပျပေးပါတယျ။
ကိုယျဝနျဆောငျစဉျအတှငျး ဖွဈပျေါနိုငျတဲ့ ရောဂါမြားစှာကို တားဆီးပေးပါတယျ။ (ဥပမာ- ဖောရောငျတာ၊ ဆီးခြို၊ ကိုယျဝနျသှေးတိုးရောဂါ)
မီးဖှားနစေဉျအတှငျး ဖွဈလာတဲ့ သငျ့ခန်ဓာကိုယျက စိုးရိမျပူပနျမှုပမာဏကို လြော့ကစြပေါတယျ။
၇။ မီးမဖှားမှီ အပွောငျးအလဲတှနေဲ့ ပတျသတျပွီး လလေ့ာပါ
မီးမဖှားမီကာလက မိဘဘဝသို့ အကူးအပွောငျးဖွဈပါတယျ။ အမြိုးသမီးတဈယောကျဟာ ဒါကို ကိုယျဝနျဆောငျနစေဉျ တှကွေုံ့တတျပါတယျ။ လူတဈယောကျစီမှာ ကိုယျဝနျဆောငျစိတျအပွောငျးအလဲက မတူညီတဲ့အခြိနျတှမှော တှကွေုံ့ရတာကွောငျ့ လအတိအကြ မရှိပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ ပုံမှနျအားဖွငျ့ ၃လ၊ ၄လကြျောလာပွီးနောကျမှာ တှကွေုံ့ရတတျပါတယျ။ ၂မှာ၊ ၃မှာပူးမြှျောလငျ့ထားတဲ့ မိဘတှဟော ကလေးတဈယောကျပဲ မြှျောလငျ့ထားတဲ့ မိဘတှထကျ စိတျဖိစီးမှု ပိုမြားပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ သူတို့ဟာ မှေးဖှားပွီး နလနျပွနျထူနိုငျဖို့ အခြိနျမြားမြား လိုအပျသလို မိသားစုနဲ့ အိမျထောငျဖကျဆီကနေ အကူအညီတှေ ပိုပွီး လိုအပျပါတယျ။
၈။ ရိုးရိုးမှေးဖှားတာနှငျ့ ခှဲမှေးတဲ့အကွောငျးကို လလေ့ာပါ
တခြို့ကိုယျဝနျဆောငျအမြိုးသမီးတှဟော ရိုးရိုးမှေးဖှားကွတာ ရှိသလို၊ ခှဲမှေးတဲ့သူတှလေညျး ရှိပါတယျ။ ဘယျလို ဆုံးဖွတျရမယျဆိုတာကတော့ ကိုယျဝနျဆောငျမိခငျတှရေဲ့ ကနျြးမာရေးအပျေါမှာ မူတညျပါတယျ။ ကနျြးမာရေးကောငျးတဲ့ မိခငျတှအေတှကျ ရိုးရိုးမှေးတာ ပွဿနာမရှိပမေယျ့ ကိုယျခံအားနညျးသူတှေ၊ ရောဂါရှိသူတှမှော ခှဲမှေးတာက ပိုအဆငျပွစေပေါတယျ။ ကိုယျဝနျဆောငျမိခငျတှဟော ရိုးရိုးမှေးရမလား၊ ခှဲမှေးရမလား? ခှဲစိတျမှေးရမယျ့ ရောဂါလက်ခဏာမြားနှငျ့ လက်ခဏာမြားကို နားလညျစဖေို့ မီးယပျသားဖှားနှငျ့ တိုငျပငျဖို့ လိုပါတယျ။
Previous articleအရမ်းချစ်ကြပြီးမှ သေကွဲ ကွဲရတဲ့ အဖြစ်လောက် ကြေကွဲစရာကောင်းတာမရှိဘူး။
Next articleခွေးမမွေးခင်ကနဲ့ ခွေးမွေးပြီးနောက်ပိုင်း သင့်အတွက် ဘယ်လိုတွေကွာခြားသွားမလဲ